भेरी अस्पतालको आइसोलेशन भरिएपछि नयाँ भर्ना लिन बन्द | गोचाली खवर
बाँके, १ बैशाख ।
नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालले थप कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेशसनमा राख्न नसक्ने भएको छ । अस्पतालको आइसोलेशन संक्रमितले भरिए पछि भेरी अस्पतालले थप कोरोना संक्रमितलाई राख्न नसक्ने भएको जिल्ला कोभिड–१९ संकट ब्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) का फोकल पर्सन तेजबहादुर ओलीले बताए ।
उनले भेरी अस्पतालको ६५ बेड मध्ये ३० चैतसम्म ६२ वटा बेड भरिएको बताए । अव थप संक्रमित राख्न सक्ने अवस्था छैन । तीन वटा बेड जटिल खालका विरामीका लागि भनेर छुट्याएर राखेका छौँ,’ उनले भने ।
३१ चैतमा ११३ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ५९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । पछिल्लो पटक पुष्टि भएका संक्रमितलाई राख्न समस्या भएको फोकल पर्सन ओलीले बताए । ‘सिकिस्त विरामीलाई समेत आइसोलेशनमा राख्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
थप संक्रमित भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैनः भेरी अस्पताल
भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि १४२ बेड ब्यवस्थापना गरिएको छ । तर जनशक्ति अभावका कारण ६५ वटा बेडमात्र संचालनमा ल्याउन सकिएको भेरी अस्प्तालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले बताए ।
उनले हालको जनशक्तिले थप बेड संचालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । अव आउनेले बेड नपाउने बताउँदै उनले बेड भए पनि जनशक्ति नभएकोले थप संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिने बताए । उनले अति सिरियस विरामी आए पनि भर्ना गर्न नसकिने जिकिर गरे । ‘विरामी हेर्ने जनशक्ति नभएपछि बेड राख्नुको कुनै तुक छैन,’ उनले भने ।
उनले कोरोना संक्रमितका लागि ब्यवस्थापन गरिएको बेडमा अन्य रोगका विरामीलाई राखिएको जानकारी दिए । कोरोनाका विरामी हेरेर मात्र हुँदैन । अन्य विरामीको पनि उपचार गर्नै पर्यो,’ डा. थापाले भने ।
उनले २४ जना कोरोना संक्रमित आइसियूमा रहेको बताए । ति विरामीको उपचारमा २५ जना विरामी खटिदै आएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले भेरी अस्पताललाई चिकित्सक सहित ४२ जना जनशक्ति दिएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको जनशक्तिले ६५ जना भन्दा धेरै विरामी हेर्न सक्ने अवस्था नरहेको डा. थापाले स्पष्ट पारे ।
आइसोलेशन स्थापना गर्न डिसिसिएमसीको माग
भेरी अस्पतालको आइसोलेशन कोरोना संक्रमितले भरिएपछि डिसिसिएमसीले स्थानीय तहलाई आइसोलेशन स्थापना गर्न माग गरेको छ । आइसोलेशन अभावमा कोरोना संक्रमितको उपचार र ब्यवस्थापनमा समस्या देखिए पछि डिसिसिएमसीले स्थानीय तहलाई आइसोलेशन स्थापना गर्न सुझाव दिएको हो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ सरुवा भई गएपछि कोरोना संक्रमितको उपचार र ब्यवस्थापनमा समस्या आएका फोकल पर्सन तेजबहादुर ओलीले बताए । उनले सरुवा भएर आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउने वित्तिकै थप आइसोलेशन निर्माण गरि संचालनमा ल्याइने बताए । ‘२ बैशाखका दिन नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाजिरी हुनुहुन्छ । त्यसपछि आइसोलेशन निर्माण र संचालनको ब्यवस्थापन हुनेछ,’ उनले भने ।
Previous articleनेपालको गतिविधि नियाल्न दशगजा नजिकै भारतद्वारा सिसि क्यामेरा जडान
Next articleनरैनापुरका १४ हजार नागरिक अझैँ निरक्षर
विकासमा फड्को मारेका वडा अध्यक्ष दीपक दिनरात कोरोना संक्रमितको हेरचाहमा सक्रिय (फोटो फिचर)
भेरी अस्पतालको इमरजेन्सी वार्ड समेत कोरोना संक्रमितले भरिभराउ (फोटो सहित)
बाँके र दाङका अक्सिजन प्लान्टसँग भएका ८,६०० सय मध्ये १,८०० सिलिण्डर मात्र आलोपालोमा संचालन
भेरी अस्पताल र विद्यालयलाई रेडक्रसले दियो सरसफाई सामग्री
भेरी अस्पताललाई अवधि पत्रकार संघको सहयोग
संक्रमितको घर–घरमा पुगेर उपचारमा सहयोग गर्दै वडा अध्यक्ष रिजाल (फोटो फिचर)
कोरोना संक्रमितको घरमै पुगेर उपचार र परामर्श दिने नेपालगन्ज उपमहानगर १ को तयारी
डुडुवाको आइसोलेशनलाई रेड्क्रसको सहयोग
अक्सिजन नपाउँदा कोभिड अस्पतालको क्षमता विस्तार रोकियो
विकासमा फड्को मारेका वडा अध्यक्ष दीपक दिनरात कोरोना संक्रमितको हेरचाहमा सक्रिय...